Konke odinga ukukwazi ngaphambi kokuqasha ikhadi lesikweletu | Ezezimali Zomnotho
Konke odinga ukukwazi ngaphambi kokuqasha ikhadi lesikweletu
USusana Maria Urbano Mateos | | Ama-akhawunti asebhange, Umnotho jikelele
Iba ne ikhadi lesikweletu Ngaphandle kokungabaza, kuyinto elula yangempela, ekuvumela ukuthi wenze noma yiluphi uhlobo lokuthenga ezitolo ezingokoqobo naku-inthanethi ngaphandle kokuphatha ukheshi, nokuba sethubeni lakho lokuthola imali ku-ATM ngayinye onayo. Ngaphandle kokungabaza kuzwakala njengethuba okungekho ozophuthelwa lona, ​​kepha ngaphambi kokuqasha le nsimbi yezezimali, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kusho ukuthini ukuqasha ikhadi lesikweletu, futhi ubheke izinhlobo ezahlukahlukene zamakhadi akhona, ukuze ungabheka zonke izinketho bese wenza isinqumo esingcono kakhulu.
1 Liyini ikhadi lesikweletu?
2 Kusho ukuthini ukuba nekhadi lesikweletu?
3 Ziyini izinzuzo zokuba nekhadi lesikweletu?
4 Kwenzekani uma ngingakhokhi ikhadi lami lesikweletu ngesikhathi?
5 Ngazi kanjani ukuthi ngililungele ikhadi lesikweletu?
6 Ungayisayina kanjani ikhadi lesikweletu?
Liyini ikhadi lesikweletu?
Una ikhadi lesikweletu iyithuluzi lezezimali lapho ibhange likunikeza inani lemali ongalisebenzisa ukuthenga imikhiqizo nezinsiza ezikhungweni zomzimba naku-inthanethi, ngombandela wokuthi ekupheleni kwenyanga ukhokhe ubuncane obusungulwe ngokuya okuthengile phakathi nenyanga, ukhokhela okusele kancane kancane. Izinsizakalo eziningi njengokuqasha imoto noma ukulala emahhotela athile zidinga ikhadi lesikweletu ukuze zikwazi ukuzithenga, ngoba zimelela indlela yokuzivikela uma igumbi noma imoto ihlangabezana nanoma yimuphi umonakalo. Ikhadi lesikweletu liyasiza futhi ekwenzeni zonke izinhlobo zokuthenga online nokuhlukanisa izinkokhelo zibe izitolimende zanyanga zonke lapho izitolo zinganikeli ngale ndlela.
Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi ungadidanisi ikhadi lesikweletu ne- ikhadi le-debit. Ngenkathi usekhadini lesikweletu yibhange elikuboleka inani elithile lemali ukuthenga kwakho, ngekhadi lasebhange kufanele kube nguwe ofaka inani lemali olifunayo ku-akhawunti, futhi ukuthenga kwakho kuzokwehliswa kusuka kuyinto. Umehluko omkhulu useqinisweni lokuthi ikhadi lasebhange lisebenza njengethuluzi lokonga, lapho uzosebenzisa khona lokho osunakho kuphela, ngenkathi ikhadi lesikweletu likunikeza ukuguquguquka kokuthenga okukhulu, ukwazi ukubakhokha kancane kancane .
Kusho ukuthini ukuba nekhadi lesikweletu?
Una ikhadi lesikweletu Akunzima ukukufeza, kepha uma usunayo, kufanele ube nesibopho ngempela uma kuziwa ekuphatheni izimali zakho ukuze ukwazi ukuhlangabezana nezinkokhelo ngesikhathi. Yilapho ibhizinisi langempela lekhadi lesikweletu lingena khona. Ibhange likunikeza imali mboleko yokwenza ukuthenga okudingayo, ngokushintshanisa ikhomishini encane ngokuthenga ngakunye okwenziwayo. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ukuthenga okuningi okwenzayo ngekhadi lesikweletu kuzokhiqiza inzalo, okungakhuphuka uma wephuza ukwenza inkokhelo ehambisanayo noma uma ungakhokhi ubuncane obumisiwe. Ngale ndlela, ukuthenga okuncane okungakhokhiwe kungaba umthwalo osindayo kakhulu uma singakunaki ngesikhathi.
Okuhle ukuthi izikhathi eziningi uzothola amabhange akunikeza izinketho zenzalo ongazitholi kulokho okuthengile inqobo nje uma ushiya isikweletu sakho ngo-zero ngaphambi kosuku lokuvala. Uma sifunda ukusebenzisa i- amakhadi esikweletu ngokukhalipha sizothola kubo ithuluzi elingasusa umthwalo kithi
Ziyini izinzuzo zokuba nekhadi lesikweletu?
La inzuzo enkulu ukuba ne- ikhadi lesikweletu ukuthi uzohlala unethuba lokwenza izinkokhelo ezincane nezinkulu ngaphandle kokuthi lokhu kube ngumthwalo osindayo wezezimali okufanele uwukhokhe ngokushesha. Uma izinkinga zakho zingukukhokha, okusho ukuthi unayo imali, kepha kufanele ulinde umholo noma ukuthi wenziwe ukukhokhela izindleko zakho, ungangabazi ukuthi ikhadi lesikweletu lizoba yindlela efanelekile kuwe.
Ngokwengeziwe, amabhange ngokuvamile anikela ngamaphromoshini akhethekile nokunikezwa kwamakhasimende awo, njengohlelo lwamaphoyinti ongalusebenzisa njengesikweletu ukuthenga okuningi. Uzokwazi nokufinyelela ekhonsathini noma ubonise ukuthengisa kwangaphambilini, kanye nokukhushulwa okukhethekile kwesizini. Uma uthanda ukuhamba a ikhadi lesikweletu libalulekile, Hhayi ukuqasha izimoto kuphela noma ukuhlala emahhotela, kepha kuzokuvumela futhi nokuthi uphume egumbini labezimo eziphuthumayo uma kwenzeka udinga ithikithi labezimo eziphuthumayo, ukhokhele usizo lwezempilo noma enye insizakalo oyidingayo.
Konke lokhu kuyizinto ezinhle eza nokuqasha a ikhadi lesikweletu, futhi ngaphandle kokungabaza ungazijabulela inqobo nje uma wazi ukusebenzisa ikhadi lakho ngokuzibophezela ngokukhokha okungenani inani eliphansi ngesikhathi esisungulwe kwinkontileka yakho. Ukuze ufunde imithwalo yemfanelo eza nokuba nekhadi lesikweletu, qhubeka ufunde le ndatshana:
Kwenzekani uma ngingakhokhi ikhadi lami lesikweletu ngesikhathi?
Uma umusha ku umhlaba wamakhredithi Kubaluleke kakhulu ukuthi ubheke umqondo womlando wesikweletu. Ngaso sonke isikhathi lapho uthola umkhiqizo wezezimali ofaka umugqa wesikweletu (okungukuthi, ikhadi lesikweletu, imalimboleko yomuntu siqu noma imali ebanjiswayo), uyahlolwa ngokuya ngendlela okhokhe ngayo isikweletu. Uma ukwenze ngesikhathi, uma ubuyisa inani eligcwele, uma ukhokhe inzalo namakhomishini, uma weqe isikweletu sakho noma usisebenzise ngendlela efanele.
Lonke lolu lwazi luyingxenye ye- umlando wesikweletu, futhi lapho ufuna ukucela esinye isikweletu sanoma yiluphi uhlobo, izinkampani zizosibuyekeza futhi ngokususelwa kulokhu bazothatha isinqumo sokuthi bazokunikeza noma cha, noma ngaphansi kwamiphi imibandela nezinhlelo abazokunikeza ngazo isikweletu. Uma unomlando omuhle wesikweletu, uzonikezwa amazinga enzalo akhethekile nezikimu ezingcono zezimali, kuyilapho abantu abanomlando omubi wesikweletu bengaze bavunyelwe izicelo zabo.
Njengokungathi lokho bekunganele, ukubambezeleka kokukhokha isikweletu sakho kuzodala inzalo usuku nosuku izokwanda, kube nzima ukukhokha. Kungakho ngaphambi kokuqasha ikhadi lesikweletu kufanele wazi kahle umthwalo olimelelayo, futhi uma ungenakho ukuphepha okuphelele ukuthi yilokho okudingayo nokuthi ungathobela zonke izinkokhelo ngesikhathi esifanele. Kungcono ukuthi ubheke enye insimbi yezezimali ukuphatha imali yakho.
Ngazi kanjani ukuthi ngililungele ikhadi lesikweletu?
Kuyiqiniso ukuthi akuwona wonke umuntu okulungele ngokwezimali ukuba ne- ikhadi lesikweletu, futhi nalabo, izikhathi eziningi abanalo ulwazi oludingekayo lokwenza ukuphathwa kahle kwezimali. Uma ufuna ukufaka isicelo sekhadi lesikweletu, sincoma ukuthi ube nephrofayili elandelayo:
Ukuba umuntu omdala onemali engenayo engaguquguquki ekhokhwa njalo ngenyanga ukukhokhela zonke izidingo zakho eziyisisekelo nokuningi.
Zijwayeze ukwenza izinkokhelo ngesikhathi.
Wake waphatha ikhadi lasebhange.
Ukufinyelela ku-smart phone ukuze ukwazi ukuthola izaziso futhi ube nesitatimende se-akhawunti ngaso sonke isikhathi.
Jwayela uhlelo lokukhokha lwasebhange futhi uke wakhokha ngaphambilini.
Yiba nesabelomali esisungulwe nyangazonke futhi wazi kahle ukuthi utshala kuphi noma usebenzise imali yakho kuphi.
Uma ukhomba ngezici esazichaza phambilini, ungumuntu ofanele ukufaka isicelo sekhadi lesikweletu. Sizokutshela ukuthi ukwenze kanjani ngokushesha.
Ungayisayina kanjani ikhadi lesikweletu?
Ukuqasha a ikhadi lesikweletu Kufanele uye ebhange olithandayo, uphathe imibhalo edingekayo. Kufanele ugcwalise isicelo futhi sizobuyekezwa ngokuya ngomlando wakho wesikweletu. Uma ungenayo, kuzobhekwa izinto ezifana neholo lakho, iminyaka yakho nesikhathi obusebenza ngaso. Ngokuya ngalokhu, uzonikezwa umugqa wesikweletu wekhadi lakho, futhi ungaqala ukulisebenzisela ukuthenga kwakho kwansuku zonke.
Inzuzo ukuthi amabhange amaningi anikeza ithuba lokwenza konke kuningi lwe- inqubo online, ngakho-ke ungathola indlela yokuthola ikhadi lakho kusuka enduduzo yekhaya lakho. Kuzo zombili lezi zikhathi, imibhalo eceliwe imvamisa ilandelayo:
Ubunikazi obusemthethweni (i-DNI noma i-NIF)
Ubufakazi bemali engenayo yenyanga.
I-akhawunti yasebhange edonswa imali uma unayo.
Ikheli leposi noma ele-elektroniki lapho ungathola khona izitatimende ze-akhawunti yakho.
Kubaluleke kakhulu ukuthi uma uqasha i- ikhadi lesikweletu chaza usuku olunqamulelwe kahle kakhulu, okuzoba isikhathi lapho umjikelezo omusha wanyanga zonke wokuthenga okwenzayo uqala. Futhi, hlala njalo ucacisa umnqamulajuqu okufanele ukhokhelwe, ngoba uma ungathobeli inkokhelo ngesikhathi, njengoba sishilo ngaphambili, uzobe uzimisele ukukhokha inzalo namakhomishini angeziwe. Landela lezi zeluleko futhi uzothola ikhadi lesikweletu ithuluzi elingcono kakhulu lokuphathwa kwakho kwezezimali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Konke odinga ukukwazi ngaphambi kokuqasha ikhadi lesikweletu
Izizathu eziyi-9 zokutshala imali emakethe yamasheya ngo-2018
Umsebenzi wezabasebenzi eSpain